बर्माको गरीब परिवारमा जन्मिएका कुमार कार्की रोजगारीको सिलसिलामा कलिलै उमेरमा थाईल्याण्ड पुगेका थिए । बैंककमा कहिले पुलमुनी सुते । कहिले भोक-भोकै हिँडे । यसरी जीवनलाई शुरु गरेका कार्की अहिले थाईल्याण्डका प्रतिष्ठित व्यवशायी हुन् । समाजसेवी हुन । थाई नेपाली सँघको वर्तमान अध्यक्ष हुन् । विभिन्न सँघसँस्था, मठमन्दिर, विध्यालय आदिका चन्दादाता हुन् । उनै कुमार कार्कीले आफ्नो जीवनमा भोगेका सँघर्षशील अनुभवहरूलाई समेटेर 'जीवन सँघर्ष' आत्मकथा तयार पारी अप्रिल-४ -२०१८(चैत्र-२१ गते) होटल अन्नपूर्णमा भव्य बिमोचन गरेका छन् । जसको प्रकाशन मिडिया सर्भिस नेपालले गरेको छ ।
चलचित्र, साहित्य तथा विभिन्न सँघसँस्थामा आवद्ध व्यक्तिहरूको भीडमभिडमा समारोह सम्पन्न भएको थियो । शताब्दी पुरुष-सत्य मोहन जोशीको प्रमुख आथित्य तथा मन्तव्य, राजेश हमाल, भूवन चन्द, तथा चर्चित कलाकाहरूको उपस्थिति थियो । प्रा. रामकृष्ण रेग्मी र प्रा. चिन्तामणी योगीले समिक्षा गरेका थिए । थाई डा. थानारा सोमखाने तथा भुवन चन्दले मन्तव्य राखेका थिए ।
यसै क्रममा धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनलाई नेपाली ५ लाख रुपैया पनि कुमार कार्कीले दान गरे । पुष्तौंदेखि बर्मामा जन्मे-हुर्के पनि नेपाली कला-सँस्कृति र पहिचानलाई बर्मा र थाईल्याण्डका प्रवासी नेपालीहरूले जोगाईरहेको जानकारी दिए ।
नेपालीहरू दिनानुदिन रोजगारीको सिलसिलामा बिदेश जाने गर्छन् । कति मान्छेहरू गरीबी र अभावमा रुमल्लिन्छन् । उनिहरूले मेरो आत्मकथा पढे धेरै हेसल्ला मिल्नेछ । साथै नेपाल, बर्मा र थाईल्याण्डमा रहेका नेपालीहरूको माया प्रगाढ बन्नेछ भन्ने उद्घोष गरेका थिए ।
नेपाल नजन्मेर पनि नेपाली भाषा र सँस्कृति सिकाउने परिवार र समाजलाई यो कृति समर्पण गरेका छन् । लेखन-सम्पादन रमेश खड्काको रहेकोछ ।